24 Usaitira vanhu vakaipa shanje,+ uye usapanga kufambidzana navo.+ 2 Nokuti mwoyo yavo inoramba ichifungisisa zvokupamba, uye miromo yavo inoramba ichitaura zvinhu zvinotambudza.+ 3 Imba inovakwa nouchenjeri,+ uye inosimbiswa kwazvo noungwaru.+ 4 Dzimba dzomukati dzichazara nezvinhu zvose zvinokosha uye zvinofadza nokuda kwokuva nezivo.+ 5 Munhu anoshandisa simba rake nokuchenjera murume akagwinya,+ uye munhu ane zivo anowedzera simba.+ 6 Nokuti ucharwa hondo yako nokutungamirira kwounyanzvi,+ uye pane vanopa mazano vazhinji pane ruponeso.+ 7 Uchenjeri hwechokwadi hwakanyanya kukwirira kubenzi;+ uye harizovhuri muromo waro pagedhi. 8 Ani naani anoronga kuita zvakaipa, achanzi tenzi wepfungwa dzakashata.+ 9 Kusazvibata kwoupenzi chivi,+ uye museki anosemesa vanhu.+ 10 Wakaora mwoyo pazuva rokutambudzika here?+ Simba rako richava shoma. 11 Nunura vaya vari kuenda kunourayiwa; uye vaya vanodzedzereka vachienda kunourayiwa, haiwa vadzivise.+ 12 Kana ukati: “Tarira! Takanga tisingazvizivi,”+ iye anoona zvakaita mwoyo haazozvizivi here,+ uye iye anonyatsotarira mweya wako haazozvizivi here,+ oripa munhu wepanyika zvinoenderana nebasa rake?+ 13 Mwanakomana wangu, idya uchi, nokuti hwakanaka; ita kuti uchi hwomumazinga hunotapira huve mumukanwa mako.+ 14 Saizvozvowo, ziva uchenjeri kuti ubatsire mweya wako.+ Kana ukahuwana, ipapo uchava nenguva yemberi, uye tariro yako haizoparadzwi.+ 15 Usavandira nzvimbo inogara munhu akarurama sezvinoita munhu akaipa;+ usapamba nzvimbo yake yaanozororera.+ 16 Nokuti munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka;+ asi vakaipa vachagumburwa nedambudziko.+ 17 Muvengi wako paanowa, rega kufara; paanogumburwa, mwoyo wako ngaurege kufara,+ 18 kuti Jehovha arege kuzviona zvikava zvakaipa mumaziso ake, akarega kumutsamwira.+ 19 Usashatirwa nokuda kwevakaipa. Usaitira vanhu vakaipa shanje.+ 20 Nokuti hapazovi nenguva yemberi nokuda kwomunhu chero upi zvake akaipa;+ rambi revanhu vakaipa richadzimwa.+ 21 Mwanakomana wangu, itya Jehovha namambo.+ Usafambidzana nevaya vanoda zvokupanduka.+ 22 Nokuti njodzi yavo ichangoerekana yavapo,+ zvokuti ndiani anoziva kutsakatika kuchaita vaya vanoda zvokupanduka?+ 23 Mashoko ayawo ndeevakachenjera:+ Kusarura pakutonga hakuna kunaka.+ 24 Munhu anoti kune munhu akaipa: “Wakarurama,”+ marudzi achamutuka, mapoka emarudzi achamupa mhosva. 25 Asi zvichafadza vaya vanomutsiura,+ uye vachakomborerwa nezvinhu zvakanaka.+ 26 Iye anopindura nenzira yakarurama achatsvoda miromo.+ 27 Gadzirira basa rako kunze, urigadzirire mumunda.+ Pashure uvakewo imba yako. 28 Usapupurira wokwako zvakaipa pasina chikonzero.+ Ipapo uchava benzi nemiromo yako.+ 29 Usati: “Ndichamuitira sezvaakandiitira.+ Ndichatsiva mumwe nomumwe zvinoenderana nezvaakaita.”+ 30 Ndakapfuura nepamunda wesimbe+ uye nepamunda womuzambiringa womunhu ane mwoyo usina njere.+ 31 Tarira! wose zvawo wakamera sora.+ Rukato rwakafukidza pamusoro pawo, uye rusvingo rwawo rwakanga rwaputsika.+ 32 Naizvozvo ini ndakaona; ndakatanga kuzviisa mumwoyo;+ ndakaona, uye ndakagamuchira kurangwa uku:+ 33 Kumborara zvishoma, kumbotsimwaira zvishoma, kumbopeta maoko zvishoma kuti urare pasi,+ 34 uye urombo hwako huchasvika segororo romumugwagwa uye kushayiwa kwako somunhu ane zvombo.+